Kenya iyo South Africa oo wajahaya dagaal ka dhan ah ICC | shumis.net
Home » News » Kenya iyo South Africa oo wajahaya dagaal ka dhan ah ICC
Kenya iyo South Africa oo wajahaya dagaal ka dhan ah ICC
Maxkammada fadhigeedu u yahay magaalada Hague ee ICC ayaa maanta marxalad adag wajihi doonto iyadoo dalalka xubnaha ka ah Maxkamadaasi ay ka doodi doonan shuruuc muhiimka ah oo ay maxkamadaasi ku howl gasho.
Mid ka mid ah qodobada sida weyn loogaga doodi doono shirka golaha ICC ee Hague waxa uu yahay go’aanta muranka badan dhaliyay ee tirsigiisu yahay 68.
Go’aankaasi ayaa waaxda dacwad oogidda u ogolaaneysa inay adeegsadaan cadeyn marqaati diiday inay marqaati sii ahaadaan.
Kenya, sigaar ah waxa ay ugu ololeyneysaa in dalalka xubnaha ka ah golahan ay diidaan isbedelkaasi, kaas oo dalkani bariga AFrika ku yaalla ay u arkaan in loo adeegsanaayo kiiska ka dhanka ah madaxweyne ku xigeenka William Ruto iyo weriyaha Joshua Arap Sang, kawaas oo loo haysto dembiyo ka dhan ah aadanaha.
Madaxda dalalka Afrika oo ay horkacayaan Koofur Afrika iyo Kenya waxa ay maxkamadda keli ah ee dembiya caalamka qaada ay ku eedeynaayaan inay dacweyso hogaamiyayaashooda oo keli ah.
Maxkamadda ayaa hadda u careysan dalalkan Kenya iyo South AFrika, Kenya waxaa lagu eedeynaayaa inay ogolaatay in la handado marqaatida kiiska ka dhanka ah Ruto, Koofur AFrikana, waxay ku guuldareysatay xiridda madaxweynaha Sudan Al-bashiir oo maxkamadda ay raadineyso.
Laakiin madaxda ICC oo ay ka mid tahay madaxweynaha Silvia Fernandenz iyo dacwad oogaha, Fatou Bensouda waxa ay maxkamadda ku tilmaameen mid dhexdhexaad ah, waxayna ku doodeen in isbedelkan sharciga ICC uu noqonaayo mid maxkamadda xal dhexe ay ku raadineyso.
Ms Bensouda ayaa waxa ay horey u laashay eedaha ka dhanka ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxayna ku dooday in marqaatiyaasha la laaluushay, loo caga jogleeyay ama marag been ah ay bixiyeen.
Taasi ayaa William Ruto ka dhigtay madaxweyne ku xigeenka keli ah ee asigoo xil haya uu kiis uga socdo ICC.
Waxaa lala xiriirinaayaa rabshadihii 2007dii Kenya ka dhacay kaddib doorashadii lagu murmay. Qiyaastoo 1300 oo qof ayaa ku dhimtay malaayiin kalena way ku barakeceen rabshadahaasi.
Title: Kenya iyo South Africa oo wajahaya dagaal ka dhan ah ICC